Home Wararka G/X Bangiga dhexe oo caddeeysay sida loo musuqay lacagahii maqnaa. (Dhageyso)
G/X Bangiga dhexe oo caddeeysay sida loo musuqay lacagahii maqnaa. (Dhageyso)
Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxman Beyle aya lagu caddeeyay sir badan uu qarinaayay taasoo salka ku haysay lacago dowladda ay ka heshay Sucuudiga oo si gaar ah loo isticmaalay kaddib amar uu bixiyay Wasiirka Maaliyadda. Guddiga maaliyadda oo maalmo ka hor soo saaray warbixin ay ku caddeeyeen in ay maqan tahay lacag dhan $41 milyan oo doollar lacagtaas oo ku maqan wasaaradda Maaliyadda iyo Gobolka Banaadir.
Waxaa maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka dood culus ay yeesheen xildhibaanada loogana dooday Miisaaniyada Dawlada oo mar kale ay Fadeexad Cusub kusoo baxday.
Waxaa si qoto dheer loo lafa guray halka ay ku maqan tahay lacagtaas, balse meeshii laga sugaayay in uu qodob qodob u caddeeyo wasiirka Maaliyadda, aya waxaa la soo shir tagay handadaad iyo in uu siyaasadeeyo caddeeymaha lagu hayo sida uu isaga iyo RW Kheyre ay u lunsadeen lacagaha ka maqan qasnadda dowladda.
Waxaa sido kale si layaab leh u difaacay Wasiir Beyle, RW Kheyre isago sheegay in uu ka warqabo halka ay lacagtaas ku baxday isla markaana sheegay in guddiga Maaliyadda aanay waxba ka ogeyn waxa ay soo qoreenna ay tahay kutir kuteen.
Si gaar ah Waxay eedeyntaas ugu socotay Wasaarada Maaliyada iyo Gobolka Banaadir,iyadoo buuq uu ka dhashay Wax isdaba marintaan lasoo bandhigay.
Gudoomiye kuxigeenka Bankiga Dhexe Ee Soomaaliya,Maryan oo Baarlamaanka Golaha Shacabka hor tegtay ayaa waxay faah faahisey Lacagta Meesha ay ku baxday,Dalka ku yaboohay,Wasiir Beyle iyo Sida Qasnada Bankiga iskaga maamushay.
Halkan ka dheyso G/X Bangiga hadalkeedii maanta
Previous articleDood kulul oo leysku dhaafsaday Baarlabaanka iyo qiil loo la’ayahay (Daawo)
Next articleUgandan military chief pays visit to Mogadishu
Jubbaland oo uga digtay gancsatada in ayan qaaliyeeynin raashinka
Raxan Raxan Ayax ah oo ku habsaday G/Shabeelada Dhexe